Sheeko Xiiso Leh: Kooxda Chelsea Oo 6 Sano Ka Hor Ku Dhawaatay Saxiixa Kylian Mbappe, Sababta Uu Ugu Biiri Waayay & Hadal La Yaab Leh Oo Ay Hooyadiis Sheegtay Oo Shaaca Laga Qaaday – Kooxda.com
Sheeko Xiiso Leh: Kooxda Chelsea Oo 6 Sano Ka Hor Ku Dhawaatay Saxiixa Kylian Mbappe, Sababta Uu Ugu Biiri Waayay & Hadal La Yaab Leh Oo Ay Hooyadiis Sheegtay Oo Shaaca Laga Qaaday
Dheemanka kooxda PSG iyo xulka qaranka France ee Kylian Mbappe ayaa si aad ah in uu kooxda chelsea ku biiro xagaagii 2012 sida uu xaqiijiyay indha-indheeyihii hore ee kooxda chelsea ee Serge Daniel Boga.
Mbappe ayaa noqday xiddiga da,yarka ah ee ugu fiican adduunka kadib markii uu xilli ciyaareed cajiib ah soo bandhigay xilli ciyaareedkii 2016/2017 isaga oo dhaliyay 26 gool 44 kulan oo uu u saftay kooxda Monaco.
Qaab ciyaareedka xiddiga reer France ayaa keenay in lagu naanayso halyeeyga reer France ee Thierry Henry isaga oo qabtay indhaha kooxaha reer yurub.
Kooxda PSG ayaa noqotay kooxda ku guulaystay saxiixa 19 jirkan iyaga oo ka bixiyay lacag dhan 160 milyan oo euro bilowgii xilli ciyaareedkan kadib markii uu amaah ku qaatay PSG xilli ciyaareedkii hore.
Laakiin sida laga soo xigtay Boga Xiddiga wacadaraha ka dhigaya France iyo adduunkaba ayaa u ciyaari lahaa kooxda chelsea hadii ayna Hooyadiis ka hor istaagin in uu ku biiro Blues kadib markii uu tijaabo ku qaatay kooxda sanadkii 2012.
“Chelsea waxa ay ahayd kooxdii ugu horaysay ee tijaabo siisa, waxa aan tijaabo siinay ka hor Real Madrid”ayuu Boga u sheegay Goal.
“Waxa aan lahaa saaxiib u shaqeeya Nike, Denis Chantron Markii aan ku booqday France ayaan kulanay waxana uu igu yidhi “Miyaad aragtay wiilkan yar ee loogu yeedho Mbappe?, waxa uu u ciyaaraa Bondy koox yar oo ka dhisan Paris”.
“Waxa aan u sheegay in aanan arag waxana uu igu yidhi”Waa in aad daawato”. waxa aan tagay garoonka waanan daawaday, waxa aan dib ula hadlay isaga waxanan ku idhi” wiilku Runtii waa wax”.
“Waxa aanu sheegay chelsea arinta, waxanan u ogolaaday in ay qaadaan talaabadooda, waxa aan la xiriiray qof walba oo chelsea oo aan la macaamilo sida Jim Fraser waxa aan ku idhi” Dhagayso waxa aan kuu hayaa wiil aad u baahantahay in aad aragto’.
“Waxa aan keenay isaga iyo qoyskiisa waxa uu ahaa mid tayo fiican leh sida uu haatan yahay, waxa uu ciyaaray kulan ay chelsea 7/0 uga badisay Charlton”.
“Todobaad kadib waxa aan u tagnay isaga iyo qoyskiisa waxanana ku nidhi” Dhagayso, waanu la dhacnay waxa aan aragnay, laakiin waxa aan doonaynaa in aan tijaabo kale ku marino kadib waan arki doonaa”.
“Waxa aan xasuustaa Hooyadiis maalintaas, waxa ay ku hadashay luuqada France iyada oo wliba deg-degaysa aniguna waan turjumayay”.
“Waxa ay tidhi” Dhagayso Wiilkaugu ma soo laabanayo, hadii ay doonayaan waa in ay haatan qaataan, hadii kale 5 sano kadib waxa ay ku soo laaban doonaan iyaga oo ku doonaya 50 milyan oo euro”.
“Taas ayaa ahayd wixii ay tidhi, laakiin waxa aan ku idhi kuma odhan karo sidaas waxa ay ahayd mid igu adag”.
“Way saxnayd wakhtigaas waxa ay kaliya sheegtay 50 milyan oo euro laakiin haatan 160 milyan ayaa lagu iibisaday, sidaas darteed waxa ay ogayd tayada wiilkeeda”